सौर तूफान: विशेषताहरु र नतीजाहरु | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले कहिल्यै सुन्नुभएको छ सौर तूफान दुबै चलचित्र र मिडियामा। यो एक प्रकारको घटना हो जुन हाम्रो ग्रहलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ यदि यो भयो भने। यस प्रकारको घटनाले उत्पन्न गर्ने सबैभन्दा ठूलो शंका पृथ्वी यस सौर तूफानले आक्रमण गर्ने खतरामा छ कि छैन भन्ने हो।
तसर्थ, हामी यस लेखलाई समर्पण गर्न गइरहेका छौं तपाईंलाई बताउन सौर्य आँधी के हो र यसले हाम्रो ग्रहमा कस्तो असर पार्दछ।
2 सौर्य आँधीको जोखिम
3 आज यदि सबैभन्दा ठूलो सौर तूफान भएको छ भने?
सौर तूफान एक घटना हो जुन सूर्यको गतिविधिले गर्दा हुने छ। सूर्य र यसको क्रियाकलापले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दछ, यद्यपि तारा हाम्रो ग्रहबाट धेरै टाढा छ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले सौर्य आँधीबेहरीले वास्तविक नोक्सान गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास गर्दछन्, यद्यपि यो उनीहरूले गर्न सक्ने केही अवसरहरूमा देखाइएको छ। यी घटनाहरू परिणाम स्वरूप देखा पर्दछ सौर फ्लेयरहरू र कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शनको। यी विस्फोटहरूले एक सौर्य हावा उत्पन्न गर्दछ र हाम्रो ग्रहको दिशामा यात्रा गर्ने कणहरूको फटहरू।
एक पटक यो पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ, एक geomagnetic तूफान उत्पन्न गर्न सकिन्छ जुन धेरै दिन सम्म रहन सक्छ। सौर तूफान भित्र हामी सूर्य को सतह मा चुम्बकीय गतिविधि छ र कि सूर्य धब्बा पैदा गर्न सक्छ। यदि यी सनस्पटहरू ठूला छन् भने त्यसले सौर्य ज्वालाहरू निम्त्याउन सक्छ। यी सबै गतिविधिहरू प्रायः सूर्यबाट दमले भरिएको हुन्छ। जब यो प्लाज्मा निकालिन्छ, दोस्रो घटना कोरोनल मास इजेक्शन भनिन्छ।
पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरीका कारण, कणहरू आइपुग्न सामान्यतया it दिन लाग्छ। यो एक कारण यो छ कि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरी लाइटहरू. सूर्यसँग ११ बर्षको चक्र छ र वैज्ञानिकहरूले विश्वास गरे कि उनीहरूमा सबैभन्दा बढी सौर क्रियाकलाप भएको शिखर २०१ 11 मा थियो। रेकर्डमा सबैभन्दा गम्भीर सौर तूफान मध्ये एक १ 1859 XNUMX in मा भएको थियो र क्यारिंग्टन घटनालाई धन्यवादका रूपमा चिनिन्छ। यो सौर तूफानले ग्रहाभरि गम्भीर विद्युत चुम्बकीय समस्या उत्पन्न गर्‍यो। उत्तरी बत्तीहरू त्यस ठाउँमा देख्न सकिन्छ जहाँ यसलाई सामान्य रूपमा सूचीबद्ध गर्न सकिदैन। इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक उपकरणहरूमा पनि ठूला समस्याहरू उत्पन्न भए।
अन्य हल्का सौर तूफान १ 1958 1989, १ 2000।,, र २००० मा देखा पर्‍यो। यस आँधीबेहरीले कम प्रभाव पा .्यो तर त्यहाँ ब्ल्याकआउट्स र उपग्रहहरूलाई हानी भयो।
सौर्य आँधीको जोखिम
यदि यो घटना ठूलो छ भने, यसले ग्रहमा बिजुली अवरोध गर्न सक्छ। यो हुन सक्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रभावहरू मध्ये एक यसले विश्वभरि बिजुली मिल्छ। फेरि प्रकाश पाउनको लागि सबै तारिiring परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसले गम्भीरतापूर्वक संचार र उपग्रहहरूलाई असर गर्दछ। हामी यसलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि मानव अधिकांश उपग्रहहरूमा निर्भर गर्दछ। आज हामी सबै चीजको लागि उपग्रहहरू प्रयोग गर्दछौं। यद्यपि, सौर तूफानले नष्ट गर्न वा उपग्रहहरूलाई काम गर्न रोक्न सक्दछ।
यसले अन्तरिक्ष यात्रीहरु लाई पनि असर गर्न सक्छ जो बिभिन्न अध्ययनहरु संग अन्तरिक्षमा छन्। सौर्य आँधीले विकिरणको ठूलो मात्रा रिलिज गर्न सक्छ। विकिरण हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। यसले क्यान्सर र भविष्यको पुस्ताहरूमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। विकिरणको साथ समस्या यसको एक्सपोजर र राशि हो। सबै भन्दा बढी वा कम हदसम्म उपकरण र इलेक्ट्रोनिक्सको कारण विकिरणको एक निश्चित मात्रामा पर्दाफास हुन्छ। यद्यपि, जो कोही विकिरणको उच्च मात्रामा लामो समयसम्म जोखिममा छन्, यी रोगहरू मध्येबाट देखा पर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
धेरै जनावरहरू पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुन्छन्, त्यसैले सौर्य आँधीबेहरीले तिनीहरूलाई विचलित तुल्याउन सक्छ। चराहरू जस्ता पशुहरू जुन उनीहरूको माइग्रेसनहरू गर्नको लागि पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा निर्देशित छन्, तिनीहरू निराश हुन सक्छन् र मर्छन्, प्रजातिहरूको अस्तित्वलाई खतरामा पार्दछन्।
यस घटनाको अर्को जोखिम यो हो कि यसले महीनौंसम्म सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई बिजुलीबिना छोड्दछ। यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने छ र आजको जस्तै बिन्दुमा फर्कनको लागि वर्षौं लाग्न सक्छ। हामी प्रविधिहरूमा यस्तै निर्भर छौं कि हाम्रो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तिनीहरू वरिपरि घुम्छ।
आज यदि सबैभन्दा ठूलो सौर तूफान भएको छ भने?
सौर्य आँधीबेहरीले सञ्चार र उर्जा नेटवर्कमा अवरोध पुर्‍याउन र बिजुली कटौती गर्न सक्षम छ भनेर हामीले देखिसकेका छौं, यो भन्न सकिन्छ कि आज हामीसँग १ storm occurred we मा आईरहेको जस्तै आँधीबेहरी आएको थियो, जीवन पक्षाघात हुनेछ। पूर्ण क्यारिंग्टन आँधीबेहरीको बेला उत्तरी बत्तीहरू क्युबा र होनोलुलुमा रेकर्ड गरियो भने दक्षिणी अरोरास स्यान्टियागो डे चिलीबाट देख्न सकिन्छ।
भनिन्छ कि प्रभातको प्रकाश यति धेरै थियो कि अखबार उज्यालोको उज्यालोमात्र पढ्न सकिन्छ। जहाँ कि क्यारिंग्टन आँधीबेहरीका धेरै रिपोर्टहरू केवल जिज्ञासुहरू बनेका छन्, यदि आज त्यस्तो केही हुने थियो भने, उच्च-टेक पूर्वाधारहरू पक्षाघात हुनेछ। हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं कि मानव पूर्णतया टेक्नोलोजीमा निर्भर भएको छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था यससँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। यदि टेक्नोलोजीले काम गर्न रोक्दछ भने, अर्थव्यवस्थाको स्टालहरू
केही विज्ञहरू भन्छन् कि विद्युतीय गडबडी टेलिग्राफ उपकरणहरू जत्तिकै कडा छ (त्यस समयमा इन्टरनेटको रूपमा चिनिन्छ), अब धेरै खतरनाक हुनेछ। सौर्य आँधीको तीन चरणहरू हुन्छन्, यद्यपि ती सबैमा आँधीबेहरी आउँदैन। पहिलो कुरा यो हो कि सौर फ्लेयरहरू देखा पर्दछ। यो जहाँ एक्स-रे र पराबैगनी प्रकाश वायुमण्डलको माथिल्लो तह आयनीकरण। रेडियो संचारमा यसरी हस्तक्षेप हुन्छ।
पछि विकिरण आँधी आउँछ र यो अन्तरिक्षमा अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि धेरै खतरनाक हुन सक्छ। अन्तमा, तेस्रो चरण एक हो जसमा त्यहाँ कोरोनल जनको छनौट हुन्छ, चार्ज कणको क्लाउड जुन पृथ्वीको वातावरणमा पुग्न दिन लिन सक्दछ। जब यो वातावरणमा पुग्छ, सूर्यबाट आउने सबै कणहरूले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गर्दछन्। यसले बलियो विद्युत चुम्बकीय उतार चढावको कारण दिन्छ। यसको जीपीएसमा हुने परिणामहरूको बारेमा चिन्ता छ, वर्तमान फोन, हवाइजहाज र कारहरूमा।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं सौर तूफानको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » सौर तूफान
नारन्जो डे बुल्नेस